काठमाडौं ४ बैशाख । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार बिहान बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति वाङ क्वीसानसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सरकारी निवास चोङनानहाइमा बुधबार बिहान ८ बजे उपराष्ट्रपति वाङ र ज्ञवालीबीच भेटवार्ता भएको ..
काठमाडौँ, ३ वैशाख । सभामुख कृष्णबहादुर महरा र संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक मामिला विभागका सहायक महासचिव मिरोस्लाभ जेन्का बीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा आज भएको भेटवार्तामा नेपालको दिगो विकास ..
काठमाडौँ, २ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत अब्दुल नासेर हुसेन अल हार्थीले आज बिदाइ भेट गर्नुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा नेपाल–साउदी अरेबिया सम्बन्धका ..
PM’s visit historical and successful: FM Gyawali
New Delhi, Abcnewsnepal : Foreign Minister Pradeep Gyawali has said that Prime Minister KP Sharma Oli’s state visit to India has been historically successful. Talking to media representatives in the ..
India-Nepal issue joint statement during PM Oli’s state visit
Apr 7, 2018(abcnews) -India and Nepal on Saturday issuedajoint statement during the state visit of Prime Minister KP Sharma Oli to India. Here is the joint statement in ..
-एबीसी न्यूज़,- नयाँ दिल्ली (रासस) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनदिने भारतको राजकीय भ्रमण ऐतिहासिकरुपमा सफल भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिलगायत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा सहभागी ..
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वान टु वान भेंटवार्ता सम्पन्न
नयाँदिल्ली, २३ चैत । तीन दिने भारतको राजकीय भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग बीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । शुक्रवार बिहान नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका ..
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदुतले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ । बुधबार सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा स्वीट्जरल्याण्डका राजदुत एलिजाबेथ वोन क्यापेलरले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो । ..
काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत टेप्लिजले नेपालको लोकतन्त्र सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयनमा ..
नेपालको विकासमा भारत सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार छ – भारतीय राजदूत सिंह पुरी
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रियता र समानतालार्ई सर्वोपरि राखी सरकारले मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ..